बाथका बिरामीले छुँदै नछुनुस् यी ५ चिज – Chetananews.com
Friday December 14, 2018 |
बाथका बिरामीले छुँदै नछुनुस् यी ५ चिज
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार १५:५२ 187 पटक हेरिएको
काठमाडौं – सामान्यतः बाथको समस्या बढी महिलालाई देखिन्छ भने पुरुष पनि यसका शिकार हुन्छन् । बाथ हुँदा जोर्नी दुख्छ र सुन्निन्छ । यसका लागि उपचार र पेनकिलर्स दिइन्छ । तर अनुसन्धानहरुबाट के देखिएको छ भने यदि बाथ बढाउने खालका खाना खाइएको छै भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बाथ धेरै प्रकारका हुन्छन् ।
तिनमा ओष्टियो बाथ र रुमाटाइड बाथ बढी भएको पाइन्छ । ओष्टियो बाथ औंला, घुँडा तथा हिपमा हुन्छ भने रुमाटाइड बाथ खुट्टाको जोर्नीमा हुन्छ । यसले ती अंग चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ । परिवारमा पहिला कसैलाई बाथ भएको छ भने यसको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अंगले काम गर्न समस्या हुने
के गर्ने ?
चिसो या तातोले सेक्ने
तौल कम गर्ने
शारीरिक अभ्यासमा जोड दिने
जोर्नी प्रत्यारोपणको उपचार
यसका अलावा बाथका रोगीले यी खाना खानबाट बँच्नुपर्छ
फ्राइ गरेको या प्याकेटको खाना
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार बाथका रोगीले फ्राइ गरेको या प्याकेजिङ गरेको जस्तै, फ्राइड मिट, चिस्याइएका तरकारीहरु खानुहुन्न । यसको ठाउँमा ताजा फलफूल तथा तरकारी खाएमा सुन्निने समस्या र दुखाई कम हुनमा सहयोग गर्छ ।
बढी तताइएको खाना
सन् २००९ मा गरिएको एक अध्ययनले बाथका रोगीहरुले बढी तताइएको खाना खान नहुने तथ्य पत्ता लगाएको थियो । यस्ता खानाले पनि बाथको समस्या बढाउँन सक्छ ।
आवश्यकताभन्दा बढी खानाले जुनसुकै खाद्यपदार्थले पनि असर गर्न सक्छन्, चाहे त्यो नुन होस् या चिनी । गुलियो पदार्थ बढी खानाले बाथ प्रभावित अंग सुन्निन सक्छ । यसैले आफ्नो डाइटमा केक, सोडा, चकलेट, मैदाजन्य पदार्थ समावेश गर्नुहुन्न ।
दूध दही शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसबाट भरपूर क्याल्सियम पाइन्छ । तर बाथका रोगीहरुका लागि दुग्धजन्य पदार्थ बिलकुल हानिकारक मानिन्छ । अनुसन्धानका अनुसार दुग्धजन्य पदार्थमा त्यस्तो प्रोटिन पाइन्छ, जसले जोर्नीको दुखाईलाई झन् बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा शरीरमा प्रोटिनको कमी हुन नदिन पालुंगो, तोफु, सीमी, दाल बढी खानुपर्छ ।
मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थ
मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थ शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ । झन् बाथका रोगीले त यसलाई छुनै हुन्न । यसले जोर्नी दुख्ने क्रम बढी पार्छ । साथै शरीरमा खतरनाक रोगलाई निम्त्याउँछ । – एजेन्सीको सहयोगमा
मृत महिलाबाट प्रत्यारोपण गरिएको
जाडोमा मर्निङवाक गर्दा यस्तो
मुख गनाउने समस्याबाट कसरी
नेता इतिहास र जनताले पैदा गर्ने कुरा होः अध्यक्ष प्रचण्ड
केन्यामा बस र मिनीट्रक ठोक्किँदा भएको दुर्घटनामा ३६ जनाको मृत्यु
सेनामा खुल्यो साढे तीन हजारका लागि जागिर (सूचनासहित)
आज ऋषि पञ्चमी, सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदै
जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ : मन्त्री थममाया थापा
प्रधानमन्त्री ओलीसँग शासकीय क्षमता नभएको कांग्रेसको ठहर
शोक प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
पूर्व सांसद जोशीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रियसभा स्थगित
निर्मलाको न्यायका लागि डा. गोविन्द केसीको साथ, महेन्द्रनगर पुगेर परिवारसँगै बसे धर्ना
नुवाकोटमा बस दुर्घटना, ३० बढीकाे मृत्यु भएकाे आशंका
नेकपा स्थायी समिति सदस्य भन्छनः बैठकमा ठूलै लफडा हुन्छ ?
नेपाली काग्रेसको महासमिति बैठक आजदेखि शुरु
काङ्ग्रेस महासमिति बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा
दाङमा बिहेको जिप दुर्घटना, बेहुलाका आमा-बुवासहित ६ जनाको मृत्यु
च्याम्पियन्स लिगको प्रिक्वाटरफाइनल समीकरण पूरा, को–को पुगे अन्तिम १६ मा ?
लिभरपुल र टोटनह्याम च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नकआउट चरणमा
महोत्तरीमा मध्यरातमा चौधरीको हत्या
बिरामीकाे बहाना बनाएर संसदीय समिति छल्दै मन्त्रीहरू
Chetana Media Pvt. Ltd.
Email: chetananews2014@gmail.com; editor@chetananews.com
Editor-in-Chief: Ram Kumar Chhetri
Editor: Ramesh Basnet
Sub- Editor : Maheshwara Chand
Manager: Nirmala Regmi
© 2017 chetananews.com